Jiritaan la'aanta - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Kala-guur la'aan
Tag: 51% weerar, Kala-guur la'aan, Caddeynta Shaqada
Jiritaan la'aanta macnaheedu waa awood la'aanta in la beddelo. Sayniska kombiyuutarka, shey aan la beddeli karin ayaa ah shey aan xaaladdiisa la beddeli karin abuuritaankeeda ka dib.
Jiritaan la'aanta waa mid ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee Bitcoin iyo tiknoolajiyada xannibaadda. Macaamillada aan la beddeli karin waxay ka dhigayaan wax aan macquul ahayn hay'ad kasta (tusaale ahaan, dowlad ama shirkad) inay wax ka qabtaan, beddelaan ama been ka sheegaan xogta ku kaydsan shabakadda.
Tan iyo dhammaan macaamil ganacsi taariikhi ah waa la hubin karaa wakhti kasta, Ma-beddelka ayaa u oggolaanaya heer sare oo ah daacadnimada xogta.
Jiritaanka la'aanta xannibaadaha dadweynaha waxay hagaajin kartaa nidaamka hadda jira ee kalsoonida iyo xakamaynta, waxayna yareyn kartaa waqtiga iyo qiimaha dib u eegista maaddaama xaqiijinta macluumaadka ay aad u fududaanayso ama si wax ku ool ah loo badinayo.
Jiritaan la'aanta waxay sidoo kale kordhin kartaa waxtarka guud ee shirkadaha badan adoo siinaya iyaga fursad ay ku ilaaliyaan diiwaanka taariikhiga ah ee geedi socodka ganacsigooda. Jiritaan la'aanta waxay sidoo kale siin kartaa caddayn khilaafaadka badan ee shirkadaha, maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa ilo run ah oo la wadaagi karo.
In kasta oo bedbeddelka uu yahay mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Bitcoin iyo tiknoolajiyada xannibaadda, haddana xogta ku kaydsan xannibaadaha si buuxda ugama adkaysato u nuglaanta: haddii weeraryahan awood u yeesho inuu ururiyo inta ugu badan heerka xashiishka - xammaal, waxay wax ka beddeli kartaa xogta haddii kale aan la beddeli karin ee weerarka loogu yeeray 51% weerar.
Xaaladdan oo kale qofka haysta 51% ee xashiishka ayaa ka hor istaagi kara macaamillada cusub inay helaan xaqiijin ama xitaa beddelaan macaamil ganacsi gebi ahaanba. Miyay sidoo kale ku dhici kartaa Bitcoin? Haa, laakiin waxay u baahan tahay xoog wax ku cunis, qalab aad qaali u ah, iyo koronto aad u tiro badan.
Dhinaca kale, shabakadaha Caddeynta Shaqada heerarka haashka ee ka hooseeya waxay u nugul yihiin weerarka noocan oo kale ah, maadaama ay soo ururinayaan xaddiga lagama maarmaanka u ah xoog-yareynta si ay u weeraraan shabakadda ma aha hawl aan macquul ahayn.